The kwoushamwari ekunze haisi pamusoro asi. Pachine nguva uye chikonzero chakanaka kushanyira South Italy ichi mwedzi! South Italy ane zvimwe zvinopiwa zvinoshamisa. The Places Best kushanyira mu South Italy anosanganisira; Anotambanudza kuti zvinoshamisa yegungwa yakanaka, fungidzira mahombekombe vakakwana, fadza kumahombekombe muzvitsuwa uye plethora maguta enhoroondo nemisha. Zvakanga zvakaoma kuderedza yedu pasi pasi chete 10, asi pano tiri 10 yakanakisisa nzvimbo kuzoshanyira mu South Italy.
This kuchengetedzwa nharaunda Zviri zvimwe rine runyararo mataundi akadai Amalfi, Erchie, Minori uye Positano - maguta aya vane nhevedzano dzimba Multi mavara kuti vanounganidza kunorwa mujinga uye zvinopa mufananidzo wakakwana photos mikana.
Uyezve, Nzvimbo dzakadai Villa Rufolo muna Ravello anopa unrivaled maonero mhiri kuGungwa reMediterranean.
Sorrento ane vaviri Amenities kuti vashanyi vanoona zvinonyaradza uyewo rakasiyana uye yakakwirira magumo Antiquities kutengeswa muguta rekare. A chikepe mashizha kubva pano kusvika vechiwi Capri, uye chinhu achisvetukasvetuka kure pfungwa nokuda rePompeii. zvisinei, Sorrento ari aizivikanwawo rakaisvonaka Gourmet chili, dzinokatyamadza chikomo dzimba (kunyange pasina mahombekombe), uye zvinoshamisa maonero Mount reVesuvius.
guta rino Ages iri papi achitevedza matombo nemhenderekedzo Gungwa reMediterranean. ritzy chiteshi Its imwe pamusoro hotspots kuItaly. Kana uchida kugara pano munguva yezhizha ungada bhuku pachine kuwana kwenyu hotera akasarudzwa sezvo dzimba bhuku kumusoro FAST. Sezvo tava pedyo kuguma inodziya mwaka, ungava mhanza ne yapera bookings!
Mavakirwo Greek oga kunokosha kushanyirwa saka kuva nechokwadi kuisa kuti kupinda kwenyu avaiita Kuwedzera kushanyira vatatu netemberi Greek zvakanaka akachengetedzwa kuti unofanira kuona. Dangwe yakavakwa pamusoro 550BC (kupa kana kutora gore) uye Temberi Hera inova zvinoshamisa.
Naples, kana Napoli, kunobva mutauro chii, ndiro guta rechitatu pakukura Italy. Kuva akatendeseka, pane maonero rinopikisa kwazvo pachikamu chino South Italy. Vamwe zviri rakakura, sviba, mhosva nomunhu uye kuparara, kune vamwe zviri chave and uye ratinoona. Chero anofuridza bvudzi rako shure, isu kufembera? Chimwe chinhu ndechokuti chokwadi kunyange. guta rino kumahombekombe Southern ine yayo unhu!
zhinji chandinodisisa Italian zvokudya dzakatangira Naples uye akaripoteredza nzvimbo dzakadai Pizza, uye Spaghetti. ndiro aya ainyepa pano uye kazhinji inoratidza yakachena, zvekwaunogara akura zvinhu. wokukwezva vashanyi muna Naples zvinosanganisira rakakura Ages Castle, New Castle, uyewo egungwa nhare Castel Del Ovo. The guta zvakare pedyo reVesuvius, chete rinoita gomo riri kondinendi European.
Homes yakavakwa muna Trulli manyorerwo vari yaakaita conical ibwe matenga pasina kushandisa dhaka (Zvisinei, Handisi muvaki saka regai kutaura neni kuti). Misha zvekare kwakatanga remakore rechi14 uye dzinokatyamadza zvachose, zvichiita mumwe anofanira kuona uye maguta dzakanaka mu Southern Italy kunoshanyira.
tsvaka, Ndiri kukuyambirai pachine. The Photo mikana munzvimbo ino vane penga. Chenjera kuti urege kurasikirwa chaicho! The akanaka muguta rekare Tropea iri vakahwanda pamusoro zvimwe haachaoni mawere uye mugwagwa kubva rakamanikana jecha pamhenderekedzo, zvinonzi kunge yakavambwa Hercules pachake.
Kana uri dzinoyevedza, pane vaviri naka makereke muna Tropea zvakare, Santa Maria Del Isola iri chechi Ages rakanga rakavakwa pachitsuwa kunyange makore siltation zvakaguma munyika zambuko achiumba pakati chitsuwa uye yakaoma. Mumwe ndiye Church; rine mbiri unexploded mabhomba kudanana kubva WW2 agere chete panze pamukova chechi. Veko vakatenda chivako akadzivirirwa aiva musande aive saka tarisai danho renyu!
Kurendesa Scooters kuti zip kumativi yakanaka mahombekombe vatema. Sunset aperitivo muna Pollara. Supreme kumativi akapoteredza muzvitsuwa Stromboli, Panarea, uye Lipari. Kuwana kwititika nesarufa mvura spas muna Vulcano. The Greek Vibes (haashamisi - zvitsuwa vainzi nokuda Aeolus, mwari mhepo, ne Greek Vagari). Salt kwakakanganisa dzimba vachiteura pasi kumhenderekedzo. Uye ndichinzwa akafanana uri pamusoro guru chakavanzika kuti iwe chete Wanna mugove pamwe vaunoda!
Ready zvokurongedza mabhegi ako nokuda South Itaria rwendo? Zvadaro bhuku rako chitima tikiti chete Save A Train mukati mumaminitsi. No yokuwedzera mari, hapana paine kupikisana kwakadaro, chete mafaro!
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Best Places kuzoshanyira In South Italy” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-places-visit-south-italy/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)